မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) ● ဝက်သစ်ချပင်အောက်က မောင် | MoeMaKa Burmese News & Media
“ဒီကျောင်း… ဒီဆရာ / ဆရာမ…ဒီသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဘဲ အတူတူကျောင်းတက်ရအောင်လားဟင် “တဖွဲဖွဲ တဖြေးဖြေးကျ နေတဲ့ မြူနှင်းအောက်ဝက်သစ်ချပင်ကြီးက မလှုပ်မယှက်၊ သူကလည်း တုတ်တုတ်မလှုပ်။
ကြည့် …. ဆေးလိပ်သောက်ပြန်ပြီ။ ငယ်စဉ်ကတည်းက မျှော်မှန်းထားတဲ့ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒ၊ အဲ့ဒီဆန္ဒမျှော်လင့် ချက်ရဲ့အဝင်လမ်းဖြစ်တဲ့ စက်မှု လက်မှု အထကအကြောင်း ရှင်းပြရတာလည်း အခါခါ။ သူ့အဖို့ ဖြောင်းဖျနှစ်သိမ့်ဖို့ စကားလုံး က ဗလာနိတ္ထိ၊ တိတ်ဆိတ်ခြင်းနဲ့အတူ သက်ပြင်းချသံအပြိုင် မှုတ်ထုတ်လိုက်လိုက်တဲ့ ဆေးလိပ်ငွေ့ကြား တရွေ့ရွေ့ထွက် သွားခဲ့သူ သူယောင်မယ်တယောက်လေလား။ မြူနှင်းဖွေးဖွေးအောက် ဝိုးတဝါး ရေးတေးတေး မှုန်ဝါးဝါးနဲပပါလား။
ရည်မှန်းချက်တခုနဲ့ ချစ်သူဆန္ဒအကြား လွန်ဆွဲရင်း ရပ်တန့်မရနိုင်ခဲ့အချိန်တွေက တစက္ကန့်ပြီး တစက္ကန့်၊ တမိနစ်ပြီး တမိနစ် ကျော်ဖြတ်နေချိန် ပုခုံးထက်ပေါ် နှင်းစက်ကလေးတွေ တဖြောက်ဖြောက်ကျလာမှတော့ အလန့်တကြားမေ့အကြည့် နံနက်စောစောတေးသံသာ သီဆိုမယ့် ကျေးငှက်ကလေးတွေ ထပျံသွားတာကြောင့်လား … ? သူ့ကို ချစ်တဲ့သူဆီ အမြဲဆုံ တွေ့နေတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ ကြေကွဲစရာလမ်းခွဲကြောင့်လို့လားရယ် မသိ၊ ဝက်သစ်ချပင်ကြီးက ငိုကြွေးနေပါရော့လား။ နှုတ် မဆက်ဘဲ ထွက်သွားရက်သူ ချစ်သူနဲ့အတူ ကျေးငှက်ကလေးတွေပါ အဝေးဆုံးဆီ ပျံထွက်သွားခဲ့တဲ့အချိန် ငိုကြွေးနေတဲ့ ဝက်သစ်ချပင်အောက် သူ့နှလုံးသားက တဆစ်ဆစ် နာကျင်ခံစားနေဆဲ။
“ဒီနေ့ ဈေးနေ့လေ ဦး …”
ငါးရက်တခါ ဈေးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ မြို့လွိုင်လင်ဈေးကြီးကတော့ ရိုးရာမပျက် အစဉ်အလာအတိုင်း ကိုယ့်ရဲ့ခြံထွက် သီနှံတွေရောင်းချ၊ တပတ်စာအတွက် လိုအပ်တာဝယ်ကြ၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ရောင်းဝယ်မပျက်စည်းကားနေတာတော့ အရင် အတိုင်း၊ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်တိုင် ရိုးရာမပျက် အစဉ်အလာမပျက် အပြောင်းအလဲမရှိတော့ပေမယ့် လူကသာ ပြောင်းလဲ သွားခဲ့လို့ ဈေးကြီးအတွင်း ယောင်ပေပေလူတယောက်ကို ဘယ်သူကမှ သတိမထားမိခဲ့။ သူကလည်း ဘယ်သူကိုမှ မမှတ် မိတော့ … မသိတော့ …။
ဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဘဝ။ မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ လွဲချော်ခြင်းတွေနဲ့ အသားကျခဲ့တဲ့သူ့အဖို့တော့ အထူးထူး အထွေထွေ ခံစားမနေ ခဲ့။ လူသူ ရှင်းနေသေးတဲ့ နာရီစင်နံဘေး ပလက်ဖောင်းအပေါ် အေးအေးလူလူ စီးကရက်ဖွာနေရင်း လေပြင်းတချက် ဝှေ့တိုက်မိတဲ့အခိုက်အတန့်၊ ဂျာကင်ဇစ်ဆွဲအတတ် မျက်ဝန်းထောင့်က အမဲစက်တခုအတါက် လှည့်အကြည့် ….
“ဘယ်တုန်းက ရောက်သလဲဟင် ..?
အရိုးစင်းဆုံးမေးခွန်းအတွက် အရှင်းဆုံးအဖြေက သူ့အတွက်အဆင်သင့် ဖြစ်မနေခဲ့။ အထစ်ထစ်အငေါ့ငေါ့ ပြန်ဖြေလိုက် တာက မလှမပ၊ ပြုံးလက်စအပြုံးပေါ် အပြုံးဆင့်ရင်းနဲ့ “တူနေတယ်ဆိုလို့ ကြည့်နေတာလေ ထင်တောင်မထင်ရဘူးနော် ..”
“+++ +++ +++ ”
” မြးမလေးကို မုန့်လာကြွေးတာ.. သူ ဂျီကျနေတယ်လေ”
“အင်း နက်ဖြန်တရားစခန်းဝင်ရမှာ… ဒီနေ့ပြင်ဆင်စရာတွေ ပြင်ဆင်ရအုံးမှာ………”
ကုန်းတဝက် ရေအဆုံးဆိုရင်တော့ ဒီအဖြစ်က ဘဝတခုလုံးအဆုံပေါ့နော်။ အချစ်ခါးခါး အတိတ်ခါးခါးအတွက် ကော်ဖီခါးခါးနဲ့ အတူ မျောချဖို့တောင် “နောက်များမှလေ” လို့ အကြောင်းပြန်လိုက်တော့ ပြန်စဉ်းစားပါဦးရယ်လို့လည်း အယူခံမတက်နိုင်၊ တခဏတာလေး တနာရီထဲရယ်လို့လည်း စောဒက တက်မရပါလားနော်။
ဘဝအတွက် ငေးပြီးရင်း ငေးနေဦးမယ်။ ဆန္ဒအတွက် ဝေးပြီးရင်း ဝေးနေဦးမယ်။ မျှော်လင့်ချက်အတွက် အရှုံးပေးပြီး ရင်း အရှုံးပေးဦးမှာမို့ တူနှစ်ကိုယ် နှစ်ဦးအကြား ဆိုလက်စစကား ဆိုစရာမရှိတော့ပါလား …။
ခေတ္တခဏ လွိုင်လင်ဈေးကြီးက ငြိမ်သက်သွားသလို တဖွဲဖွဲကျနေတဲ့ မြူနှင်းကလေးတွေက တုန့်ဆိုင်းသွားသလို တချက် တချက် ဝှေ့လာမယ့် ထင်းရှူးရနံ့တွေက ပျောက်သွားခဲ့သလို အရာရာ တိတ်ဆိတ်နေတာကို ခလေးမလေးက တွန်းထိုး လှုံ့ ဆော်လိုက်တော့မှတော့ “သွားတော့မယ်နော်…. ဆေးလိပ်လျှော့ သောက်ပါဦး … ”
ဟိုအတိတ်ကလို ခေါင်းလည်းမခါ ခေါင်းလည်း မငြိမ့်၊ နေမြဲ နေဆဲအတိုင်း… မြူနှင်းတွေအကြား အသာအယာထွက်သွားခဲ့ ပြီကော …။ ဒီတခါတော့ သူမတယောက်ထဲတော့မဟုတ။်နံဘေးမှာ ခလေးမလေးတယောက်…၊၊
“ဟို ဖိုးဖိုးကြီးက ဘာမှန်းမသိ စကားပြောတိုးတိုး တိုးတိုးနဲ့။ ဖွားဖွားက ရယ်စရာမဟုတ်ဘဲ ရယ်နေတာဘဲ…ဟွန်း…”
One Response to မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) ● ဝက်သစ်ချပင်အောက်က မောင်
Catwoman on November 26, 2016 at 6:17 pm
Sounds depressing. Need to move on with life. Take antidepressants if needed. Life is too short to live in the past and not enjoy. The other lady moved on and she s going for meditation which is good for her. The guy s still stuck in the past
နယူးယောက်ခ်မြို့၊ မြန်မာစာပေဟောပြောပွဲ – မင်းကိုနိုင်၊ ကာတွန်းအော်ပီကျယ် https://t.co/IN9wYNLKXQ https://t.co/8HCGGZGIEy about 59 minutes ago ReplyRetweetFavorite